DAAWO SAWIRO:- Qorshaha Eleboorka cusub ee Muqdisho laga dhisi doono oo lasoo bandhigay naqshadiisa iyadoo ay dhisi doonaan Turkiga - iftineducation.com
DAAWO SAWIRO:- Qorshaha Eleboorka cusub ee Muqdisho laga dhisi doono oo lasoo bandhigay naqshadiisa iyadoo ay dhisi doonaan Turkiga
aadan21 / December 29, 2012
iftineducation.com – DAAWO SAWIRO:- Qorshaha Eleboorka cusub ee Muqdisho laga dhisi doono oo lasoo bandhigay naqshadiisa iyadoo ay dhisi doonaan Turkiga.
Qorshe lagu dhisi doono eleboor cusub ayaa lagu wadaa dhowaan in laga bilaawo magaalada Muqdisho iyadoo qorshahaan ama mashruucan ay fulin doonaan shirkado & dowlada Turkiga, garoonkan ayaa naqshadiisa ka kooban tahay shan iyo toban meelood oo ay diyaaraduhu rakaabka ka qaadayaan oo casri ah iyadoo irdaha diyaaradaha laga gali doono ay yihiin kuwa sida tooska ugu dhagaya diyaarada oo aan wax jaranjaro ah la fuuleynin.
Hadaba waxaan weli cadeyn in dagida dayuuradaha ee Aadan Cade uu noqon doono halka lagu wado dhismaha cusub & in meel kale oo cusub laga dhisi doono balse maapka hoos ku yaala wuxuu tilmaamayaa in runway-ga hada jira la adeegsan doono.
Hadaba muuqaal faah faahsan ayaan dhowaan soo bandhigi doonaa hadii Alle idmo, sawiradana ka daawo halka hoose.
Daawo Sawirada Shirkada Isgaarsiinta Hormuud oo soo bandhigtay adeeg Internet oo cajiib ah.
DAAWO VIDEO DHACDO YAAB LEH:-Aabe Soomaaliyeed Oo Si’an La Arag U Diley Wiil Islantisa Dhashay Iyo Xukun Adag Oo Lagu Xukumay